अग्रज श्रष्टाका सुन्दर रचनाका साथमा उद्गार सुन्दैछु ... रेडियो नेपालको चर्चित साहित्यिक कार्यक्रम उद्गारको यो भेटमा नेपाली साहित्यकारहरु कवि मञ्जु काँचुली, श्रवण मुकारुङ, प्रतीक ढकाल, बुद्धि मोक्तान र चेतनाथ कणेल 'हरित' का कविताहरू र कथाकार कृष्णपक्षको 'तिर्खा' कथा संग्रह बाट शीर्षकथा 'तिर्खा' प्रस्तुत भएको छ ।
तिर्खाको कथा वाचन र यो मिठो प्रेमका लागि आदरणीय दाजु कार्यक्रम संचालक साहित्यकार रमेश पौडेल र कथावाचन गरिदिनु हुने प्रस्तोता बबिता ढकाललाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद । कथा यहाँ सुन्नुहोस ।
झापाको 'कंचनजंघा' र पूर्वेली शव्द साहित्यमा तिर्खा
विर्तामोड, झापाको पत्रिका 'कंचनजंघा'मा तिर्खा कथा संग्रहको पुरानो रिभ्यु (जी के पोख्रेलजीले लेख्नु भएको) प्रकाशित भएको रहेछ । र यही समय यता नागरिक दैनिकको शुक्रवारमा तिर्खा संग्रहभित्रको कथा 'साइनो बेच्ने केटी' पनि प्रकाशित भएको रहेछ । दुवै पत्रिकालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
संसारमा अनेक तिर्खाहरू हुन्छन आदत, लत र अम्मलहरु हुन्छन । यसरी तिर्खाहरु अतृप्त हुन्छन । जो लागिरहन्छन, मेटिइरहन्छन र फेरी लागिरहन्छन । यो क्रम अनन्त चलिरहन्छ । चलिरहोस ।
Labels: पत्र पत्रिका
जहाँ जहाँ छन तिर्खालु मनहरु .. त्यहाँ त्यहाँ पुगेको छ 'तिर्खा'
जहाँ जहाँ छन तिर्खालु मनहरु त्यहाँ त्यहाँ पुगेको छ तिर्खा । आत्मीय फेसबुक साथी विष्णु बिक्रम निरौला विराटनगर अस्पतालको पट्यारलाग्दो बसाइमा सम्झन्छन -'तिर्खा' अनि भेटछन नजिकैको पुस्तक पसलमा 'तिर्खा कथा संग्रह' । फेसबुकमा भेटिएको उहाँको यो तस्वीर यहाँ शेयर गरें ।
Krishna Thapa को तिर्खा विराटनगर पुस्तक पसलमा पनि ऊपलव्ध रैछ, अस्पताल मै भए पनि पढ्न चाहेर समय समायोजन गर्ने प्रयासमा कृष्णपक्षको "तिर्खा" हाता लगाए ...
Posted by Bishnu Bikram Niraula on Friday, 10 July 2015
पराजयका भक्काना - जोतारे धाइबा (शव्दकोश )
मनछुने कथाहरुको संग्रह हो तिर्खा - रूपेश विष्ट
बाक्लो परिचय छैन मेरो उहाँसँग । यद्यपी उनका केही गीतहरुको भिज्युअल हेरेको छु । जे जति सामिप्यता छ यही फेसबुकमा भएको छ हाम्रो । तिर्खा कथा संग्रह पढेपछि सुन्दर तस्वीर सहित मिठो हौसलारुपी शव्दहरु लेखिदिनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ..
विभिन्न कथाहरुको संग्रह हो कृष्णपक्ष को "तिर्खा" जसमा मनछुने कथाहरु 'अपरिभाषित प्रेम' 'साईनो बेच्ने केटी' 'पर्खाल पारीको त्यो देश इजरायल' 'बुढो मान्छेको मन' जस्ता अनेकौ कथाहरु समेटिएको छ | प्रेम के हो ? कस्तो हुन्छ प्रेमको रंग ? यस्ता यस्तै प्रश्नको खुल्दुली मेटाउनेछ तिर्खाले तपाईहरु पनि एकपटक अवश्य पढ्नुहोला !! हृदय देखिनै धेरै धेरै धन्यवाद कृष्णजीलाई, वहाँले गर्दा "तिर्खा" पुस्तक पढ्ने अवसर पाएको छु जसले गर्दा मेरा मनका तिर्खाहरु मेट्न पाए !
विभिन्न कथाहरुको संग्रह हो कृष्णपक्ष को "तिर्खा" जसमा मनछुने कथाहरु 'अपरिभाषित प्रेम' 'साईनो बेच्ने केटी' 'पर्खाल पारीको...
जहाँ जहाँ छन तिर्खालु मनहरु त्यहाँ त्यहाँ पुगेको छ तिर्खा । आत्मीय फेसबुक साथी विष्णु बिक्रम निरौला विराटनगर अस्पतालको पट्यारलाग्दो बसाइमा...
सुनिल श्रेष्ठ असल विचारक, मेरा आत्मीय मित्र तथा समसामयिक बिषयमा कलम चलाउने लेखक समेत हुन् । एकै देशमा रहेर पनि टाढाको शहर जेरुसेलममा हुनुभ...
विर्तामोड, झापाको पत्रिका 'कंचनजंघा'मा तिर्खा कथा संग्रहको पुरानो रिभ्यु (जी के पोख्रेलजीले लेख्नु भएको) प्रकाशित भएको रहेछ । र यही ...